China N'uko n'ịnyịnya Ikanam retangular ịsa ahụ isi emepụta na suppliers | Chengpai
N'uko n'ịnyịnya Ikanam retangular ịsa isi
Nọmba nlereanya CP-3T-50100FLD
Echichi N'uko n'ịnyịnya
Ogologo 40 ”(1000mm)
Obosara 20 ”(500mm)
Aka isi mmiri 304 igwe anaghị agba nchara, sịlịkọn
Handheld ịsa sooks 304 igwe anaghị agba nchara, roba
Net arọ (kgs) 21,00
Gross arọ (kgs) 23.00
Ogwe aka ịsa ahụ gụnyere EE
Ikanam ọkụ gụnyere EE
Foset gụnyere EE
1. Wuru n'ime Mini hydraulic ike generator maka ikanam.
2.Three agba Ikanam ìhè na-egosi mmiri okpomọkụ
3.Solid ewu nke 304 igwe anaghị agba nchara.
4.The elu nke ịsa ogwe aka bụ kemeghi site eji.
5.Easy dị ọcha. Enwere ike ihichapu slicon nozzles ngwa ngwa.
6.Three ịgba nakawa etu esi: efefe mmiri ozuzo ịsa, ọkpọkọ na handheld ịsa ahụ.
Nke a okomoko ụlọ n'ịnyịnya Ikanam ịsa set nwere n'ezie obosara ịgba gị. Nnukwu igwe anaghị agba nchara nnukwu mmiri mmiri ozuzo na-agba mmiri isi mmiri, ịsa ahụ ịsa ahụ nsụ mmiri zuru oke mkpuchi. Y nwere ike ịnwe ahụmịhe spa n'ụlọ.
Akụkụ mmiri ozuzo nke mmiri ozuzo anọ, nke dị 500x1000mm, na chrome chrome ya na ihe eji agba ígwè nke na-egosi agụụ na oke. Ọ na-eme maka mpaghara spa dị egwu. Ọdịdị mara mma ya na nke ọla dị elu na-eme ka ụlọ ịsa ahụ dịkwuo mma.
Mpaghara buru ibu karị, nke nwere iberibe 377 nke silicon nozzles na-ekesa na ihu ihu igwe. Ngwongwo silicone na-egbochi lime a na-ewu ewu maka mmezi nnwere onwe n'efu, na-eguzogide ọgwụ na-egbochi, dị mfe ihicha, mgbochi oxidation na corrosion na-eguzogide ọgwụ. Na-arụ ọrụ dị ukwuu ọbụlagodi obere nrụgide mmiri. N'adịghị ka mgbidi ịsa ahụ na-agba mmiri na-achọ ka ị gbanwee ahụ gị iji nweta mkpuchi mmiri kachasị mma, ugwu a dị n'elu ụlọ nke etinyere na ya na-enye oke obosara maka mkpuchi mmiri nke na-agbadata na ụdị mmiri ozuzo na mmiri na-apụ na nkuku ụzọ mgbidi isi ịsa ahụ isi na-arụ ọrụ.
Ewu nke siri ike igwe anaghị agba nchara 304, na-enye mmesi obi ike nke ogologo ndụ ọrụ, ike na ịrụ ọrụ kwụsie ike. Emecha chrome polished na-enye a sleek anya, ọzọ adabara gị na ụlọ ịwụ ịke.
Ugbo aka na-ejide isi ịsa ahụ, ya na eriri igwe anaghị agba nchara 150cm na-ezute gị kwa ụbọchị. Onye na-ejide ịsa ahụ bụ nke 304 igwe anaghị agba nchara, sie ike na nchekwa.
Ogwe mmiri ịsa ahụ bụ injin nke sistemụ ịsa ahụ niile. A na - eme ozu ya ka ọ bụrụ ihe siri ike 304 igwe anaghị agba nchara, sie ike ma sie ike, agaghị enwe ike ịgba mmiri. Ịsa setịpụrụ diverter akpu nke a na-achịkwa mfe nanị.Ceramic katrij nke mere nke elu njupụta na-abụghị egbu egbu seramiiki akụkụ, iji merie dị iche iche mmiri ọnọdụ nsogbu.
Ogologo nke ogwe aka ịsa ahụ anọ nwere ike idozi site na ịpị, nye nrụgide dị ike karị maka ịsa ahụ.
Nke gara aga: Ikanam gburugburu ịsa ahụ isi na showr ogwe aka
Osote: Ikanam kichin foset nke igwe anaghị ata nchara
igbapu ọkpọkọ maka bezin na sink nke igwe anaghị ata nchara
N'uko recessed abụọ ọrụ Ikanam ịsa ahụ isi
Golden chrome ịsa ahụ panel multi ọrụ
Super ebughibu ịsa mmiri isi zoro ndokwasa
Framles akụkụ anọ ụlọ ịsa ahụ ụlọ
Rose gold chrome ịsa ahụ panel anọ ọrụ